Go'aammada isku tanaasulka ee ka soo baxay shir weynihii xisbiga S - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Go'aammada shirka ma ahan oo keliya kuwo aan fulin karo, balse waan ku farax-sanahay. Sawirle: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX
Go'aammada isku tanaasulka ee ka soo baxay shir weynihii xisbiga S
Hadal-heynta ugu weynayd ee shir-weynaha xisbiga S
La cusbooneeyay tisdag 8 april 2014 kl 16.07
La daabacay måndag 8 april 2013 kl 11.23
Hoggaanka sare ee xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ayaa la oran karaa inuu ka gaabsadey siduu dagaal furan ugu geli lahaa fikirradii uu la tagay shir-weynihii xisbiga uga dhacay magaalada Göteborg oo lagu soo gabagabeeyey maalintii axaddii.
Hase yeeshee uu hoggaanku go'aan is-rog ah ka gaaray go'aankii la xiriiray shaqa-la'aanta dhallin-yarada, isla-markaana tanaasul ka galay su'aalihii la xiriirey macaashka shirkadaha ee adeegga iyo ceeymiska waalidiinta oo saddex loo qeeybiyo.
Kolka laga hadleyo shaqa-la'aanta dhallin-yarada ayuu hoggaanka xisbigu taabacay fikirkii ururka dhallin-yarada ee xisbiga (SSU) iyo in dhallin-yarada shaqada la' loo dammaanad qaado iney helaan ama shaqo ama tacliin ugu badnaan muddo saddex bilood gudahood ah, halka ey horay ka ahayd lix bilood.
Su'aasha la xiriirta macaashka iyo hab-nolo-wanaagga ayuu tanaasulku noqday in lagu heshiiyey in maamullada degmooyinka la siiyo "awoodda" kama dambeeysta ah kolka la dooneyo in la bilaabo iskuul hor leh ee madax-bannaan, iyo iney "maya" oran karaan.
Kolka laga hadleyo ceeymiska waalidiinta waxaa lagu heshiiyey in xisbiga uu wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhici doonta sannadka foodda innagu soo haya uu tallaabo u qaado dhanka siyaasad loo simman yahay labada waalid ee dhanka ceeymiska waalidiinta. Qaar badan ee ka mid ah xubnihii shirka ku sugnaa ayaa taabac-sanaa in muddada ceeymis loo qeeybiyo saddex is-le'eg. Muddo hooyadu gaar u leedahay, mid aabbuhu gaar u leeyahay iyo mid uu reerku go'aankeeda leeyahay.
Iyada oo uu hoggaanka xisbigu sameeyay tanaasullo badan ayuu haddana hogaamiyaha xisbigu, Stefan Löfven aanay la ahayn inuu wax badan ka tanaasulay:
- May, lama oran karo waa tanaasullo. Hoggaanka xisbiga iyo ururka dhallin-yaradu (SSU) waxaan ku wada taagneyn fikir isku mid ah iyo sidii lagu joojin lahaa shaqa-la'aanta kor u kacdey ee dhallin-yarada ku habsatay. Isku dhan ayaan middaa ka taagneyn. Halka ay dhanka kale taagan tahay dawlad aan haba yaraatee doonayn inay wax ka qabato oo sugto muddo 90 maalmood ah inta aan wax taageero ah loo fidin dhallin-yarada. Marka waxey dooddayadu ku saleeyseyd sida ugu dhakhsiyaha badan ee dhallin-yarada loogu fidin karo taageero, waana mid uu shir-weeynuhu ogolaaday muddad sagaashanka maalmood ah.
Waa kuwo aad fulin karto haddaba tanaasulladan?
- Haa, ma ahan oo keliya kuwo aan fulin karo. Dhanka kale waa kuwo aan ku farax-sanahay go'aammada la gaarey, sida uu sheegay Stefan Löfven oo u warramayay laanta Agenda ee idaacadda la iska daawado ee Svt.
Go'aanka ugu hadal-heynta badnaa ee shir-weynaha xisbiga ayaa ahaa ballantii uu Löfven ku sheegay inuu dalka gaarsiin doono heerka ugu hooseeya shaqa-la'aanta ee waddammada xubnaha ka ah ururka Miodwga Yurub sannadka 2020.
Xisbiga S oo doortay xubnaha golaha sare ee xisbiga horseedi doona